I-china HFD Horizontal Froth Pump (Repalce AHF) abakhiqizi nabaphakeli | damei kingmech futha
Amandla: 0-3151m3 / h
Materail: CR27, Cr28, CD4MCu, liner yerabha
HFD slurry futha kuyinto enezingqimba-esindayo umsebenzi esika froth slurry futha. isicelo saso sishaya islery nge-froth enenkani. we-design-inducer blade impeller ekhethekile yokuxazulula le nkinga kalula.
Thatha inqwaba encane, ukusebenza kahle okuphezulu.
I-Special froth impeller enosayizi omkhulu we-inlet, le nzuzo kuma-solid solids amakhulu iza Kunomehluko phakathi kokumpompa i-froth slurry ne-slurry ejwayelekile.HFD slurry pump of high performance to pump high viscosity slurry.
Inkinga yokuphatha i-froth kokunye ukujikeleza kwenqubo kungakhathaza kakhulu. U-Froth uvame ukubopha iphampu ejwayelekile. I-froth inducer blade impeller ixazulula le nkinga. Umphumela uba nokugcwala okuncane kakhulu, ukukhetha okuncane kwepompo, nokusebenza kahle okuphezulu
Inzuzo eyengeziwe yalomklamo we-froth impeller kanye ne-inlet enkulu ukuthi kukhulisa imingcele yokuqina yokuqina lapho ipompo ye-centrifugal ingaphatha. Njengoba inkinga enkulu yokuphatha i-froth ifana naleyo yokuphatha i-viscous slurries, ukufaka i-slurry kupompo ukuze ikwazi ukumpompa, le mpompo ikhombise ukuthi ingumdlali ophakeme kuma-slurries aminyene abezindaba. Ngokwengeziwe, izinkinga zokugeleza kokugeleza ezijwayele ukwakhiwa kwamanye amaphampu we-centrifugal ekugelezeni okuphansi kuyasuswa kuma-viscous slurries.Imboni yezimayini iyisibonelo esiyinhloko sokusebenza okuhlaselwe yizinkinga ze-froth nezinga eliphezulu le-viscosity. Ekukhululweni kwamaminerali ore, kuvame ukuntanta ngokusetshenziswa kwama-flotation agents aqinile. Amagwebu aqinile athwala imisila yethusi, i-molybdenum noma yensimbi ukuze itholakale iphinde icutshungulwe. Lawa mabhamuza anzima adala umonakalo ngamapompo ajwayelekile we-slurry ngokuvamile abangela ukukhethwa kwamaphampu amakhulu kakhulu futhi angasebenzi kahle. Iphampu ye-Froth ingosayizi abancane futhi isebenza kahle. I-inducer impeller kanye ne-elet oversized kahle kakhulu kuqinisekisa ukuthi ama-froth noma ama-slurries e-viscous angena ku-impeller avumela ipompo ukuyihambisa iye endaweni elandelayo. kuyasebenziseka.
Ozelwe yimpompo ye-froth uxazulula lezi zinkinga ezimbili ezimayini: i-froth, i-high viscosity liquids.
Lokhu futha ingasetshenziswa kabanzi ezimayini zethusi, alumina yezimayini, insimbi.
Langaphambilini I-HADPP Heavy Duty Abrasive Slurry Pump In Series (Phindisela i-AHPP)
Olandelayo: HSD Heavy oluludaka Duty Pump (Repalce XU)
VFD Kuqondile Froth Pump (Repalce AF)
I-WAD Ebuthakathaka Yomsebenzi Olukhuni Slurry Pump (Repalce L / M)
I-API610 BB1 (SHD / DSH) Pump
I-SSD Submersible Pump